January 2, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'January 2nd, 2017'
Warar Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Weerarkii Lagu Qaaday Xarumta Ciidamada Amisom ee Xalane(VIDEO)
January 02, 2017 – Waxaa maanta qaraxyo waaweyn oo loo adeegsaday gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay ka dhaceen agagaarka xarunta ciidamada Amisom ee Xalane oo ah taliska ugu weyn Ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya. Qaraxii hore ayaa ka dhacay bar koontarool oo ku taala halka laga soo galo garoonka Aadan Cadde …
Maalinta la Qabanayo Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Maanta lagu Dhawaaqay (Akhriso)
January 02, 2017 – Guddiga loo suubiyaya Qaban qaabada Doorashada Gudoonka Baarlamaanka Federaalka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay xiliga rasmiga ah ee la qabanayo Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa. Qoraal ay soo saareen Guddiga doorashooyinka ayaa lagu shaaciyay in Doorashada Gudoomiyaha Baarlamanaka Soomaaliya la qabanayo 11-ka bishan Janaayo, halka Gudoomiye …
Qaraxyadii lagu Weerary Xarunta Xalane (VIDEO)
Wararka ayaa sheegaya in dilkan uu salka ku hayo arrimo la xiriira Hinaase ama Maseyr ka dib markii ninka wax dilay uu ogaaday in xaaskiisii hore ay xiriir Jaceyl la sameysatay nin kale oo isaga ay meel ka wada shaqeynayeen, iyagoo qorsheynayey iney dhawaan isguursadaan. VIDEO – 1 \_ VIDEO – 2 Guddoomiye Ku-xigeenka Jaaliyadda …
Ururka Al Shabaab oo Sheegatay Weerarkii Maanta Lagu Qaaday Xarunta Amisom ee Xalane
January 02, 2017 – Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada weeraro qaraxyo ah oo loo adeegsaday labo Gaari oo ka dhacay Irida hore ee laga galo xarunta Ciidanka AMISOM ee Xalane. War lagu daabacay bogga warbaahinta ku hadasha Afka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Qaraxyadaasi loo waday Hotelka Peace oo ku dhow xarunta Ciidanka AMISOM ee …
Baaqii Beesha Caalamka (VIDEO)
Dowladda Maraykanka oo barteeda Internet-ka ee Wasaaradda arimaha Dibedda soo dhigtay qoraalkan ayaa u goodisay rag ay sheegtay inay wadaan musuq-maasuq iyo wax isdaba marin. Dalka Ingariiska iyo dalka Sweden ayaa iyagana si sidaasi la mid ah ugu hanjabay muwaadiniinta haysta baasabooradooda.
Sawiradii u Horeeyay ee Weerarkii Saakay Lagu Qaaday Xarunta Ciidamada Amisom ee Xalane (SAWIRRO)
January 02, 2017 – Warar hadda ina soo gaaray ayaa sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay tahay xarunta ciidamada Amisom ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan albaabka hore ee xaruntaasi laga galo ee loo yaqaan (Madina Gate). Qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, islamarkaana lagu qarxiyay koontaroolka laga …
DEG-DEG: Qaraxyo Xoogan oo Goor Dhow ka Dhacay Nawaaxiga Xarunta Ciidamamada Amisom ee Xalane
January 02, 2017 – Wararka Inaga soo Gaaraya degmeda Wadajir ayaa sheegaya in goor dhow ay halkaasi ka dhaceen labo qarax oo xoogan, kuwaasi oo dhawaqooda laga maqlay guud ahaanmagaalada Muqdisho. Qaraxyadan oo ahaa kuwo aad u xoogan ayaa dhawaqoodu waxa uu ahaa kuwo aan horey loo maqal, waxaana qaraxaan kadib aagaasi laga maqlay rasaas …
Wiilkii Xaaskiisii Hore Toogtay (VIDEO)
Wararka ayaa sheegaya in dilkan uu salka ku hayo arrimo la xiriira Hinaase ama Maseyr ka dib markii ninka wax dilay uu ogaaday in xaaskiisii hore ay xiriir Jaceyl la sameysatay nin kale oo isaga ay meel ka wada shaqeynayeen, iyagoo qorsheynayey iney dhawaan isguursadaan. Guddoomiye Ku-xigeenka Jaaliyadda Soomaalida ee K/Afrika C/llaahi Shiikh Mahdi (Timacadde) …